Philips Momentum 278M1R, famakafakana lalina | Vaovao momba ny gadget
Miaraka amin'ny fivoaran'ny teleworking, ny tontolon'ny streaming ary indrindra ny gaming, ny mpanamboatra monitor dia manome safidy hafa mahaliana izay manampy ny mpampiasa hamorona fananganana marobe marobe izay manampy antsika hanararaotra ny habaka nefa tsy ho very toetra mampiavaka azy.
Ity Philips Momentum 278M1R ity dia manolotra rehetra-amin'ny-iray manaitaitra miaraka amin'ny fahaizany milalao, matihanina ary haino aman-jery miavaka. Fantaro miaraka aminay ny famakafakana lalindalina an'ity monitor Philips marobe ity sy ny zavatra niainantsika tamin'ny ankapobeny momba ny fampiasana, fantatray fa tsy te halahelo azy ianao, raha mitady mpanara-maso ianao dia mety ho tianao izao iray.
3 Fifandraisana sy HDR
4 Traikefa amin'ny feo sy multimedia
Ity Philips Momentum 278M1R ity dia misotro mivantana avy amin'ny "anadahiny" ny Philips Momentum 55-inch, Fa mifantoka amin'ny fanomezana traikefa mahavariana an'ny mpampiasa amin'ny lafiny maro, ny iray amin'izany dia ny famolavolana. Ny kalitaon'ny fananganana dia tena tsara, sonia iraisan'ny vokatra Philips, ary miala amin'ny famolavolana karazana "lalao" mahery setra, zavatra ankasitrahana ihany koa afaka mametraka azy io amin'ny toeram-pianarana na toeram-piasana. Ny famolavolana dia voadio sy kanto, manafina ny mampiavaka azy amin'ny tena zanak'ondry.
Tianao ve ny endriny? Ao amin'ny Amazon dia amin'ny vidiny lafo indrindra miaraka amin'ny fandefasana 24 ora maimaim-poana.
Samy ny bezel ambony ary ny sisiny dia "ahena" amin'ny valo milimetatra eo ho eo, ny zava-drehetra dia mijanona ho an'ny faritra ambany. Jiro herinaratra LED eo ankavanan'ny farany sy ny Ambiglow izay manodidina ny vodin'ilay fitaovana, izay misy ny fifandraisana sy ny tsanganana amin'ny fanohanany. Ity tsanganana ity dia manana rafitra fametrahana "tsindrio" mora, toy ny mahazatra ao amin'ireo vokatra Philips afovoany / avo lenta ireo, ary mankasitraka fatratra ny fahafahantsika manao tsy misy karazana fitaovana amin'ny fivoriambe voalohany.
Amin'ny ambaratonga famolavolana, ity Philips Momentum 278M1R Misongadina amin'ny kalitaon'ny fanamboarana, famolavolana indostrialy somary kanto sy manintona ary ireo tariby LED any aoriana.
Manomboka amin'ny tontonana iray izahay 27 santimetatra izay manana vahaolana 4K UHD 3840 x 2160 teboka miaraka amin'ny fifandraisana amin'ny lafiny nentim-paharazana amin'ny 16: 9 ary miaraka amin'ny fampifanarahana HDR. Ity fanapahan-kevitra ity dia manome antsika ny hakitroky ny pixel DPI 163 ary teboka pixel an'ny 0,155 x 0,155 milimetatra fotsiny, zavatra tokony hotadidina. Raisinay ny siny misy rano mangatsiaka voalohany miaraka amin'ny kaopy soda ary fanavaozana ny tontonana, izay miorina amin'ny 60 Hz.
Manana tokoa isika mahaliana 350 cd / m2 tara-pahazavana LED, satria araka ny miharihary dia miasa amin'ny tontonana LCD IPS izahay. Manana fahasamihafana 1000: 1 izahay ary mamela antsika hiara-mankafy ny 91% amin'ny laharana NTSC, 105% amin'ny sRGB, ary 89% an'ny fenitra Adobe RGB, Ka afaka nihevitra izahay fa mety amin'ny fanovana sary miorina amin'ny fitsapana anay. Marina amin'ny loko izany, ary nijanona teo akaikin'ny mari-pana miloko 6500K izahay izay miteraka sary mazava sy voajanahary, afa-tsy amin'ny mena, izay ahitan'ny mpanara-maso Philips. Raha tsy izany dia manana loko somary homogeneous isika izay toa voajanahary sy mahafinaritra sady miasa no milalao. Azonao atao ny mividy azy amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ny Amazon, aza hadino ity fotoana ity.
Fifandraisana sy HDR
Ity Philips Momentum 278M1R ity dia saika tsy manana na inona na inona, ka andao hatomboka amin'izay Tsy nahatratra ny fifandraisana USB-C avy hatrany aho. Na dia marina aza fa tsy mbola miharihary eo amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha ity teknolojia ity dia hankasitraka izany ny mpampiasa Apple. Faharoa, Manohy amin'ny fahafaha-manao be dia be izahay, ny tsara indrindra eo amin'ny tsena satria hitako:
1x 3,5mm Jack output headphone
1x USB-B Havoana (ho an'ny kojakoja sy PC)
4x USB 3.2 Downstream hampifandray ireo peripheraly (ao anatin'izany ny fiampangana haingana an'ny BC 1.2)
Ity lisitry ny seranan-tsambo tsy tambo isaina ity dia hamela antsika hanao tsy misy HUB raha manararaotra ny port-USB-B misy azy isika, zavatra iray amin'ny mpanara-maso Philips hafa dia vita amin'ny port USB-C. Izy io dia miasa amin'ny kitendry, totozy ary maro hafa, zavatra izay toa tsara indrindra amiko.
Mikasika ny HDR, voamarina izahay fa HDR400, heverinay fa tsy manana famirapiratanana na jiro lehibe izahay, koa manao izay tratry ny heriny i HDR. Manana Wide Color Gamut izy noho izany ny sakany ny loko dia somary malalaka amin'ny faritra maizina. Ny famirapiratana dia mitombina ary tamin'ny ankapobeny dia nanome valiny tsara ho antsika.
Traikefa amin'ny feo sy multimedia
Ity Philips Momentum 278M1R ity dia misy mpandahateny mitifitra midina ambany tanteraka tombanana tombana 5W ho an'ny tsirairay. Ny tena izy dia noho ny tsy fisian'ny bas rehetra, manome antsika traikefa mihoatra ny salan'isa izy. Na izany aza, mbola mamporisika ny bara fanamafisam-peo tsara toa ny Sonos Beam ho orinasa tsara ho an'ity karazana fitaovana ity aho. Izy ireo dia mahavita mameno ny zavatra niainantsika raha tsy dia mitaky be loatra izahay ary manala antsika amin'ny fomba lavitra. Amin'ny teôria, Mpandahateny voamarina DTS Sound izy ireo.
Mikasika ny zavatra niainan'ny mpampiasa dia mila manambara ny tenako aho fa mpankafy ny fanamafisam-peo ataon'ny mpanara-maso Philips, toa voajanahary sy marobe izany. Nanararaotra ny fiasa nasainy tamin'ny PlayStation 5 izahay ary tamin'ny fomba niarahanay niasa taminy tamin'ny alàlan'ny Apple MacBook Pro, ary nahatanteraka izany na ho an'ny fanontana sary na ho an'ny lalao video. Manana maody izahay Smart-Sary miaraka amina preset ho an'ny fampiasa tsirairay, ary koa ny teknolojia fampiasa FlickerFree. Mazava ho azy ireo 4 ms imputlag (GtG) fotsiny avelany hankafy ny mpitifitra sy ny lalao video hafa izahay. Eny tokoa, ny 60 Hz angamba tsy mahomby izy ireo amin'ireo gamer be mpitady indrindra.
Ny zava-niainan'ireo LED 22 RGB ao ambadiky ny rafitra izay ataon'i Philips batemy ho Ambiglow dia mahatalanjona, miteraka fahatsapana fanitrihana tena miharihary izany, ary maninona raha lazaina izany, «mahafinaritra» fotsiny ao amin'ny birao / efitranontsika, tsy misy rindranasa ivelany .
Miatrika monitor iray be dia be izahay, safidy tsara ho an'ireo mianatra / miasa amin'ny toerana iray andaniany ny fotoam-pialamboliny, mamela antsika hanatsara ny habaka izy io nefa tsy very fampiasa iray akory, miaraka amin'ny tombokase fiantohana Philips. Ny vidiny, manodidina ny 400 euro arakaraka ny vidin'ny varotra, miaraka amin'ny fandefasana maimaim-poana any Amazon.
Famolavolana malefaka sy voaorina tsara
Safidy malalaka amin'ny seranana sy ny fifandraisana
Miaraka amin'ny Ambiglow ianao dia mamonjy tadin'ny LED
Tabilao tena tsara miaraka amina fiasa sy fikirana tsara
Tsy misy USBC
Malahelo kokoa aho hamiratra bebe kokoa amin'ity sokajy vidiny ity
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Philips Momentum 278M1R, famakafakana lalina